Wiase Nsɛm | Nyan! December 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
Israel, Jordan, ne Palestine
Ɛpo a Awuo no rewe. Afe biara ɛso te anammɔn mmiɛnsa (mita 1). Ebinom suro sɛ ɛbɛduru afe 2050 no, na nsuo no nyinaa awe. Mpanimfoɔ a ɛwɔ aman yi so repɛ kwan a wɔbɛfa so abɔ nsuo no ho ban. Deɛ seesei wɔpɛ sɛ wɔyɛ ne sɛ wɔbɛtwe Ɛpo Kɔkɔɔ no mu nsuo ayi mu nkyene, na sɛ wɔyi mu nkyene wie a, wɔahwie aseɛ no agu Ɛpo a Awuo no mu. Nanso ebinom suro sɛ anhwɛ a na wei akunkum Ɛpo a Awuo no mu nnam ne emu nnua.
Nsiakyibaa adwumakuo bi ahwehwɛ mu ahunu sɛ ɛdu Buronya Da a, nnipa dodoɔ a wɔnya akomayareɛ ma yɛgye wɔn to ayaresabea no dɔɔso sene biara wɔ afe no mu. Adwumakuo no ahunu sɛ deɛ ɛtaa kɔfa wei ba ne sɛ ɛyɛ a nkurɔfoɔ dwennwene nneɛma a wɔde bɛkyɛ wɔn abusuafoɔ ne wɔn nnamfo Buronya da no ho; wei nyinaa de adwennwene kɛseɛ to wɔn so.
Britain nyansahunufoɔ de ato dwa sɛ afe 2006 mu no, abebeɛ bi wuiɛ. Mfitiaseɛ no na wɔsusu sɛ ɔdii mfie 405 nanso sɛɛ ɔdii mfie 507. Enti yɛkɔ nkrataa mu a, ɔno ne aboa a ɔnyiniiɛ paa. * Nyansahunufoɔ no ara na ɛmaa aboa no wuiɛ; wɔde no hyɛɛ frigye mu tuu kwan sɛ wɔrekɔsua ne ho adeɛ.
Latin Amerika ne Caribbean
Afe yi mfiaseɛ no, aman 33 a ɛwɔ Latin Amerika ne Caribbean yɛɛ nhyiamu bi wɔ Havana, Cuba. Wɔkaa sɛ wɔrentwe atuo bio, na mmom wɔbɛtena ase asiesie wɔn ntam nsɛmnsɛm. Wei nti wɔde ato dwa sɛ wɔyɛ ‘asomdwoe aman.’ Amanaman Nkabom Kuo Twerɛtwerɛfoɔ Panin Ban Ki-moon kɔɔ bi.
^ nky. 7 Sɛ yɛreka “aboa a ɔnyiniiɛ paa” ho asɛm a, nneɛma bi te sɛ po ase mmire nka ho. Wɔkyerɛ sɛ atena nkwa mu mfie mpempem pii.
Wiase Nsɛm—December 2014